Michael Keating oo la kulmay Wasiiradda Somaliland, Jan 10, 2018 [Photo: Online]
HARGEYSA, Somaliland - Ergayga Gaarka ee Xoghayaha Guud ee QM u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya, Michael Keating ayaa ka warbxiiyay Kulamo uu tan iyo shalay magaalada Hargeysa kula qaatey Madaxda Somaliland.
Keating ayaa Bogga Twitter-kiisa kusoo qoray in uu la kulan gaar ah la qaatey Gollaha Wasiiradda cusub ee maamulka Somaliland kaasi uu shir gudoomiyay Wasiirka Arrimaha Gudaha Maxamed Kaahin.
Waxyaabaha Keating iyo Xukuumadda Somaliland wadahadleen waxaa kamid ah caqabadaha taagan, amaanka, Abaaraha, Barakaca, shaqa abuurka, dhaqaalaha, maalgashiga iyo mashaariicda horumarinta.
Keating ayaa sidoo kale la kulmay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, oo isna uu kala hadlay xiriirka iskaashiga Somaliland iyo QM, Doorashada Baarlamaaniga maamulkaasi 2019-ka, Gargaarka, amaanka gobolka.
Waxay booqashadan Keating kusoo beegantay xilli Xiisada colaadeed oo u dhaxaysay Puntland iyo Somaliland ay ka taagan tahay gobolka Sool, gaar ahaan deegaanka Tukaraq oo 8dii bishan la wareegeen ciidamada maamulka Hargeysa.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo la kulmay Ergayga QM ee Soomaaliya Michael Keating...